I-China 11 IN 1 I-USB-C HUB Glass enomsindo nge-Ethernet RJ 45, HDMII, 100 W PD, VGA, SD, TF, 3xUSB3.0, USB2.0 + 3.5mm Jack fektri nabaphakeli | I-Huachuang Electronic
I-11 KWI-1 USB-C HUB Glass enomsindo nge-Ethernet RJ 45, HDMII, 100 W PD, VGA, SD, TF, 3xUSB3.0, USB2.0 + 3.5mm Jack
Igama lomkhiqizo: 11 Ku-1 ye-USB-C Flash Glass Hub
Amachweba: Type C To PD 100W + 4K HDMI + Ethernet RJ45 + VGA + 3 * USB 3.0 + USB2.0 + SD / TF + 3.5mm Jack
Ubude bekhebula: 150mm
Ubukhulu: 116 * 45 * 14mm
Indwangu: Icala le-Aluminium + Glass enomsindo + PC + TPE
3, 【Zonke i-USB C Hub】 Xhuma kumadivayisi we-MacBook Pro wakamuva noma e-USB-C ngehabhu le-multiport USB-C elinechweba le-Ethernet, imbobo yokushaja ye-USB C ngokulethwa kwamandla, imbobo ye-4K HDMI, umfundi wekhadi le-SD , umfundi wekhadi le-TF, i-3.5mm Audio / mic 2-in-1 jack kanye nechweba le-VGA, Amachweba ama-3 USB 3.0 kanye namachweba we-1 USB 2.0, okuvumela ukuthi uxhume ikhibhodi, igundane, umshayeli we-USB, iDiski yangaphandle kuMacBook Pro.
4, 【Ukulethwa kwamandla hu I-USB Type hub ye-USB ishaja i-MacBook Pro yakho noma amanye amadivaysi wohlobo C lapho kuxhuma i-100W port shipping. Manje amadivaysi amaningi ngokwengeziwe ne-PD Pro Support entsha ye-Mac. Ngokulethwa kwamandla, imbobo eyodwa ye-USB-C ingakunika isipiliyoni sokusheja okusheshayo kwe-Blazing. Qondanisa kahle iMacBook Pro.
5, 【Ukuvumelanisa kwevidiyo okucacisiwe kwe-3D Effect Video】 HDMI ne-VGA Support kuze kufike ku-3840 * 2160 @ 30Hz no-1920 * 1080p @ 60Hz resolution ngokulandelana. Ungajabulela ividiyo ekhanyayo yeomphumela we-3D ngokulungiswa okuphezulu kusuka kukhompyutha yakho ye-USB-C kuya ekuqapheni kwangaphandle. Ichweba le-HDMI lisekela isikrini esikhulu se-LCD TV noma libonisa iyahambisana nokukhipha i-4K Max. Ikunika ukucaca okuhle kwevidiyo ye-3D.
6, 【I-RJ45 1000M Ethernet Port kanye neDatha edlulisiwe yedatha】 Isekela i-1000Mbps Gigabit RJ45 Ethernet port, emuva emuva iyahambisana ne-100Mbps / 10Mbps RJ45 LAN. Amachweba we-3 we-USB 3.0 anesilinganiso sokudluliswa kwedatha esingu-5Gbps ne-4.5W (5V / 900mA) okukhipha amandla. Amachweba we-1 e-USB angcono okungamagundane, ikhibhodi noma amanye amadivayisi wesilinganiso esiphansi.
7, 【Yenza i-Life yakho ilula】 Yakhelwe kuma-SD ne-TF Slots ukufinyelela kalula kumafayili kusuka ku-SD yendawo yonke kanye ne-Micro SD Memory Card. Ijubane elikhulu lifinyelela ku-5Gpbs. I-3.5mm Audio / mic 2-in-1 jack ikuvumela ukuba ujabulele umculo ngama-headphone noma izipikha.
8, 【I-Stylish Design, i-Premium Yakha kanye neBhodi Ukuhambisana】 Okubanzi nokuvaleka kwe-aluminium okuncane okwenziwe ngomshoshaphansi kwenza kube ngumphelelisi ofanele wokubukeka kwakho futhi uzizwe endaweni entsha Grey. Indawo efanelekayo yokwandisa i-USB-C ye-Apple MacBook, i-Apple MacBook Pro, i-Apple I Mac / I Mac Pro (21.5 inch, 27 inch), incwadi yeGoogle Chrome uPixel, Dell, njengo-US, HP, Lenovo, nezinye izinhlobo eziningi zamalaptops zohlobo C .
Ijubane lokudluliswa kwedatha lifinyelela ku-5Gbps Ukukhishwa kwamandla okuphezulu kwe-5V / 900mAh
3 * I-USB 3.0 A port
Ukudluliswa kwedatha kufinyelela ku-480 Mbps, kusekela ukudluliswa kwedatha ye-USB2.0, futhi kuyahambisana ne-USB1.1
I-3.5mm Audio Port
Ukukhishwa komsindo wesiteshi ezi-2, futhi kusekele ukuphuma komsindo ozimele (asikho isidingo sokuxhuma i-HDMI ne-VGA)
IMIHLA: 38 * 30 * 36 CM
Esedlule: I-11 KWI-1 USB-C Docking Station ene-Ethernet RJ 45, HDMII, 100 W PD, VGA, S, TF, 3xUSB3.0, USB2.0 + 3.5mm Jack
Olandelayo: I-11 KWI-1 USB-C Multi-port Adapter ene-Ethernet RJ 45, HDMII, 100 W PD, VGA, SD, TF, 3xUSB3.0, USB2.0 + 3.5mm Jack
11 ku-1 usb c hub
usb c amaningi hub
ingilazi efudumele ye-HUB
usb c hub nge-headphone jack
I-T28 8 IN 2 Dual HDMI Type C HUB nge 2 x HDMI + ...